मन्त्रीहरूले निर्वाचन आयोगलाई सोधे– श्रीमती र छोराछोरीलाई भेट्न पनि नपाउने हो ? – email khabar | Latest news of Nepal
मन्त्रीहरूले निर्वाचन आयोगलाई सोधे– श्रीमती र छोराछोरीलाई भेट्न पनि नपाउने हो ?
प्रकाशित : २०७३ फागुन १९ गते १:२२
फागुन १९, काठमाडौं – निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचन प्रचारप्रसारमा जान नपाउने आचारसंहिता लागू गरेपछि मन्त्रीहरू असन्तुष्ट भएका छन् । आयोगले बुधबार गरेको छलफलमा मन्त्रीहरूले राजनीतिक दायित्व बन्देज गर्न खोजिएको आरोप लगाएका हुन् ।
एश्वर्या राय बच्चन र अभिषेक बच्चन फिल्म ‘गुुलाब जामुुनमा’ मा फेरी सँगै देखिन सक्ने